Suudhka buluugga ah ee buluugga ah: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato isku darka | Ragga Stylish
Suud buluug buluug ah
Ku darista dharka buluuga ah ee dharkaaga dharkaaga ayaa bixin doona saldhig aan laga adkaan karin oo lagu dhisi karo qaab muuqaal leh maalin iyo habeenba.
Buluugga buluugga ah waxaa ka buuxa faa iidooyin, oo ay ku jiraan in uusan waligiis ka baxaynin qaabka oo uu in badan uga filan yahay munaasabado kala duwan. Dhamaanteed waa midab hagaagsan oo lagu bilaabi karo ururinta dacwadahaaga.
1 Sida loo xirto dharka ciidanka badda
2 Fikradaha muuqaalka
2.1 Muuqaal rasmi ah
2.2 Muuqaal caadi ah oo casri ah
2.3 Muuqaal caadi ah
Sida loo xirto dharka ciidanka badda
Suudh buluug ah oo buluug ah ayaa lagu dari karaa dhar badan oo kala duwan, gaar ahaan kuwa cad iyo kuwa kaligood naas-nuujinaya. Doorashada hal gabal ama mid kale oo la socda waxay ku xirnaan doontaa waxaad u aragto inay ugu habboon tahay xaalad kasta.
Sidan oo kale, jaakada hoosteeda waxaad ku xiran kartaa shaati caadi ah, xariijimo ah ama caato ah. Dhididka (qoorta caadiga ah iyo tan sare), funaanadaha polo iyo funaanadaha ayaa ah xulashooyinka ay tahay in lagu xisaabtamo si muuqaalka uu u noqdo mid aan rasmi ahayn. Caddaan ayaa ah tan ugu ballaaran ee la isticmaalo, laakiin madow, cawl, iyo buluug sidoo kale waa fikrado aad u fiican.
Sida kabaha, sidoo kale waxaad ka dooran kartaa noocyo badan oo kala duwan oo la heli karo iyadoo kuxiran duruufaha: kabo (Oxford, Derby, Brogue ama loafers), kabaha canqowga (Chelsea ama Desert) iyo xitaa kabo isboorti. Midabada ugu habboon ee kabaha iyo kabaha canqowga waa madow iyo bunni, halka caddaanku uu yahay fikrad wanaagsan oo loogu talagalay kabaha isboortiga.
Munaasabadu miyay ku baaqeysaa isku xirnaan? Dacwadaha buluugga ah ee buluugga ah waxay si fiican ula shaqeeyaan xirmooyinka midabbada soo socda:
Navy buluug ah
Haddii aad doorbideysid daabacadaha, tixgeli sida Classics sida Paisley, houndstooth, dhibco polka, karbaash iyo plaid.
Sharabadu waxay kuxiranyihiin dookhaaga shaqsiyeed. Xullo lamaane caqli-gal ah si aad ugu habboonaato dharkaaga buluugga ah ee buluugga ah ee muuqaalka muxaafidka ah. Lammaane isbarbar dhigaya (labadaba qaab iyo qaab labadaba) ayaa qumman haddii aad dareento geesinimo oo aad rabto inaad muuqaal kaaga siiso taabasho shaqsiyeed.. Ugu dambayntiina waxaa jira sharaabaadyo aan la arki karin haddii waxa aad jeclaan lahayd ay tahay inaad anqawyadaada uga tagto hawada.
Gawaarida jeebka waa ikhtiyaari waxayna badanaa la mid yihiin xariga. Waxay noqon karaan midab isku mid ah kuwan, laakiin ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inay ilaaliyaan nooc xiriir ah iyagoon gabi ahaanba isku mid ahayn. Caan ku fariiso fagaarahaaga jeebka haddii aadan rabin inaad qatar gasho.
Sida saacadda, waxa muhiimka ah ma ahan wax badan midabada qeybaheeda kala duwan iyo qaabkeeda. Dabcan, oo leh suud buluug ah (ama midab kale) waxa sida ugu fiican ugu shaqeeya a saacadda saacadda smart.
Sida dhammaan dacwadaha, bixinta suunka (haddii aan loo baahnayn mooyee) ayaa kaa caawin doona inaad ku guuleysato muuqaal nadiif ah oo qurux badan. Haddii aad isticmaasho, hubi inuu la mid yahay kabaha.
Suudhka buluugga ah ee buluugga ah waa dhar aad u kala jaad ah oo si weyn loo isticmaali karo. Waad sameysan kartaa muuqaal rasmi ah, sidoo kale waxaad ku xiran kartaa qaybo dabacsan. Kuwa soo socdaa waa tusaalooyin si loogu xidho qaab rasmi ah, caqli caadi ah iyo qaab caadi ah. Iyo waxa ugu fiican ee ah in dhammaan natiijooyinkan aadka u kala duwan lagu gaari karo hal suudh.
Muuqaal rasmi ah
Waxaa jira munaasabado u baahan suud iyo dheel. Taasi waa kiiska shirarka shaqada muhiimka ah ama arooska, tusaale ahaan. Iyo midabka buluugga ah ee buluugga ah shaki la'aan waa sharad aamin ah oo ku habboon.
Markaad isku dareyso, ku bilow inaad ku darto shaati dhar cad ah. Ku dar xarig burgundy ah. Y ku dhammee muuqaalka qaar ka mid ah Oxfords madow.
Muuqaal caadi ah oo casri ah
Suudh buluug isku mid ah ayaa kuu adeegi doona si aad u sameysid muuqaal caqli-gal ah oo caqli-gal ah, taas oo ah xeerka labiska xafiisyo badan.
Way fududahay sida ku darista shaati galka badhan-hoose. Shaatiyada buluuga ah ee fudud waa koox weyn oo leh buluug buluug ah, laakiin kaliya midab kasta iyo qaab ayaa sameyn doona. Ku dhammee muuqaalka qaar ka mid ah caleenta madow ee madow.
Muuqaal caadi ah
Soo-jeedintan qaab-dhismeedka casriga ahi waa fikrad wanaagsan marka xaaladdu saamaxdo dhar badan oo dabacsan. Waxay ka shaqeyn kartaa munaasabado kala duwan oo ballaaran, gaar ahaan shaqada kadib iyo maalmaha fasaxa ah. Waa muhiim in jaakadu aysan lahayn qaab dhismeed aad u tiro badan.
Xidho funaanad tolmo wanaagsan ama funaanad gacmo gaab ah, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka. Sidii hore oo kale, maaddaama buluugga buluuggu uu si fiican ula shaqeeyo ku dhowaad dhammaan midabada, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad doorato midka aad ugu jeceshahay ugu fiican. Laakiin sharadka aaminka ahi waa madow, cawl, caddaan iyo buluug buluug ah laftiisa. Ciddiyaha kabaha maqaarka cad waxay kaa caawin doonaan inaad soo koobto muuqaalka. Waxaad sidoo kale ku siin kartaa taabasho shaqsiyeed kabaha aad ugu jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Suud buluug buluug ah